I-GONZALEZ Igama lomntu igama kunye nomvelaphi - malunga nokuzalwa
UGonzála uyisimboli esithi "unyana kaGonzalo". Igama elinikeziweyo uGonzalo livela kwigama eliqhelekileyo elithi Gundisalvus , eyayiyigama lesiLatini igama lesiJalimane elinamalungu e- German , okuthi "imfazwe" okanye "imfazwe" kunye ne- salv engachazi intsingiselo.
UGol Gonzalez ngu- 21 igama elidumileyo e-America , ngokubalo lwabango-2000. Igama le-Gonzalez liqhelekile eMexico - elona-5 liqhelekileyo ngokubhekiselele ku-2006.
Igama Lenye igama : I- GONZALES, i-CONZALAZ, i-GONZALAS, i-GONSALAS, IGONCALEZ, IMGONSALES, IMGONCALES
Kuphi abantu abanegama lomnxeba weGONZALEZ?
I-WorldNames PublicProfiler ibeka ininzi yabantu abathiwa nguGonzales eSpeyin, ngakumbi kwimimandla yaseAsturias, iIslas Canarias, iCastilla Y Leon, iCantabria neGalicia. UGol Gonzalez nguye igama elidumileyo kumazwe amaninzi ngokweedatha ezivela kwi-Forebears, kuquka i-Argentina, isiChile, iParaguay nePanama. Ikwahlula okwesibini kwiintlanga zaseSpain, eVenezuela, nase-Uraguay, kunye nesithathu eCuba.
Abantu abaPhezulu abanegama elinguGONZALEZ / GONZALES
UTony Gonzalez - umdlali wezemidlalo waseMelika
UJaslene Gonzalez - uzuze iModeli elandelayo yaseMelika
U-Emiliano Gonzalez Navero (1861-1934) - owayengumongameli waseParaguay
UFelipe Gonzalez - owayenguNkulumbuso waseSpeyin
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name GONZALEZ / GONZALES
Iimpawu eziqhelekileyo zeSpanishi kunye neentsingiselo zabo
Funda malunga nemvelaphi yamaSpanishi amagama okugqibela, kunye neentsingiselo zamagama amaninzi aseSpanish.
I-Gonzalez Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto ifana neengubo zeGrazil zeengalo okanye i-crest yegama le-Gonzalez.
Izizukulwana zikaPablo Gonzalez
Inzala yozalo loPablo Gonzalez nomkakhe, u-Antonia Candida Cordova, abatshabileyo ngo-27 Februwari 1764 eSanta Cruz de la Canada, eNew Mexico.
I-Gonzalez DNA Igama legama
Olu hlolo olukhulu lwe-DNA isifundo luvavanya i-DNA yabazali kunye noomama waseGonzález noGonzales inzala evela kwihlabathi lonke.
GONZALEZ Iforum yoLwazi lweNtsapho yeNzala
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba wegrazil yeGrazil ukuze ufumane abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho oBrown. Kukho iforamu ehlukeneyo ye-GONZALES ukutshintsha kwegama le-Gonzalez.
I-FamilySearch - GONZALEZ Genealogy
Ukufikelela kwiirekhodi ezidumileyo ezingaphezulu kwezigidi ezili-11 kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca othunyelwe ngegama le-Gonzalez kunye neenguqu zayo kwiwebhusayithi yezahlulo eziphathekayo eziphathwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
IGONZALEZ Igama lomnxeba kunye neeNcwadi zoLondolozo lweentsapho
I-RootsWeb ibamba amanqaku amaninzi angabhalwa ngabangcwaningi be-Gonzalez. Ungaphuthelwa kwi-archive engaphezu kweminyaka elishumi yokuthunyelwa kwangaphambili, ekhoyo ukukhangela kunye / okanye uphewule!
DistantCousin.com - GONZALEZ Umlando wobuGeni kunye neNtsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela iGonzalo.
Umzala wesiGoloji kunye neNtsapho Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye neembali zabantu ngabanye abanesifaniselo sikaRodriguez kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
Igama le-ACOSTA igama kunye nomthombo
Iinqununu zamandulo zamaRoma zaseRoma
Izinto zeMpilo kunye nezoBungqina kwiKayaking
ULeonardo Pisano Fibonacci: I-Biography esifutshane